ကြေးနီပန်းကန်နှင်တံဥအဖြူအဘို့ သာ. ကောင်း၏ Are အဘယ်ကြောင့်
ကြေးနီပန်းကန်ဥ White ြိမ်များအတွက်တကယ် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသလား
မေးခွန်း: ကြေးနီပန်းကန်ဥ White ြိမ်များအတွက်တကယ် သာ. ကောင်း၏ရှိပါသလား
အဖြေ: သင်ကြက်ဥလူဖြူြိမ်ကြသောအခါသင်အသုံးပြုအဆိုပါပန်းကန်လုံးတစ်ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကြေးနီဖလားမြှုပ်ထုတ်လုပ်ကြောင်း overbeat ခက်သောအဝါရောင်, creamy မြှုပ်ထုတ်လုပ်ရန် ဖန်သုံးပြီး သို့မဟုတ် သံမဏိ ဖလား။ သင်တစ်ဦးကြေးနီပန်းကန်ထဲမှာကြက်ဥလူဖြူ whisk အခါ, အချို့ကြေးနီအိုင်းယွန်းကြက်ဥလူဖြူသို့ပန်းကန်ထဲကနေပြောင်းရွှေ့။ အဆိုပါကြေးနီအိုင်းယွန်းကြက်ဥထဲမှာပရိုတိန်း၏တဦးတည်း, conalbumin အတူအဝါရောင်ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အဆိုပါ conalbumin-ကြေးနီရှုပ်ထွေးတစ်ယောက်တည်း conalbumin ထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်တယ်, ဒါတစ်ဦးကြေးနီပန်းကန်ထဲမှာကြာပွတ်ကြက်ဥလူဖြူ (ဆက်ရေး) denature မှလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
လေထုကြက်ဥလူဖြူသို့ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, စက်မှုအရေးယူသည့်လူဖြူအတွက်ပရိုတိန်း denatures ။ အဆိုပါ denatured ပရိုတိန်းရေမြှုပ် stiffening နှင့်လေကြောင်းပူဖောင်းတည်ငြိမ်, coagulate ။ ရေမြှုပ် non-ကြေးနီပန်းကန်ထဲမှာ overbeaten လျှင်နောက်ဆုံးတွင်ပရိုတိန်းလုံးဝ denatured ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ရုံသို့ coagulate ။ အဘယ်သူမျှမဒါ overbeaten လူဖြူများသောအားဖြင့်စွန့်ပစ်နေကြတယ်, ပြန် clumpy ရှုပ်ထွေးထံမှကောင်းတဲ့ foamy လူဖြူရှိသွားသည်။
ကြေးနီပန်းကန်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကအချို့သော conalbumin-ကြေးနီရှုပ်ထွေးသောတက်ချည်ထားသောကြောင့်, ထို့နောက်နည်းပါးလာပရိုတိန်းမော်လီကျူးများ, denature နှင့် coagulate အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ conalbumin နှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းအပြင်, ကြေးနီကိုလည်းထပ်မံကြက်ဥပရိုတိန်းတည်ငြိမ်အခြားပရိုတိန်းအပေါ်ဆာလ်ဖာပါဝင်သောအုပ်စုများနှင့်အတူတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အခြားသတ္တုမှာတွေ့ရတဲ့သံနှင့်ဇင့်ကိုလည်း conalbumin နှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းရန်ပန်းကန်လုံးတွေပေမဲ့လည်း, ဤရှုပ်ထွေးသောရေမြှုပ်ပိုမိုတည်ငြိမ်စေပါဘူး။
ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်သံမဏိဖလားအသုံးပြုကြသည်အခါ, ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း၏မုန့် ဟာလူဖြူတည်ငြိမ်ရန်ကြက်ဥလူဖြူမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
ရူပဗေဒမှာ "အရေးပါ" ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ
သငျသညျဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းသိထားသင့်6အရာ
ပလက်တီနမ်အုပ်စု Metals သို့မဟုတ် PGMs များစာရင်း
အံ Mass အဓိပ္ပာယ်
သင်ကရေခဲသေတ္တာဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး ROOM တွင် Cool နိုင်သလား?
တစ်ဦး Pluton ဆိုတာဘာလဲ
နွေရာသီ 2010 ခုနှစ်ထိပ်တန်း 10 ဦးပေါ့ပ်သီချင်းများ
အံ Mass ဥပမာပြဿနာ
သမ္မတအိုဘားမားနှင့် ပတ်သက်.5Wacky ဒဏ္ဍာရီ
Kendrick Lamar - ခေါင်းစဉ်မဲ့ Unmastered
အဆိုပါလဲမှို့ Gin နှင့်ဧလိ Whitney
အီလက်ထရွန်ဒိုမိန်းနှင့် VSEPR သီအိုရီ
1921 ခုနှစ်၏ Sheppard-Towner အက်ဥပဒေ
ထူးဆန်းတဲ့မတ်ေတာသညျ: Shojo မန်ဂါရဲ့ Weirdest Romance
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Brandywine ၏တိုက်ပွဲ